Somaliland: Shirkii Golaha Dhexe Ee WADDANI Oo Hal Dheeri Lagu Daray Iyo Toddoba Qoddob Oo Lagu Ansixinayo Awooda Mansabka Xirsi Oo Guux Ka Dhex Abuurey - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Shirkii Golaha Dhexe Ee WADDANI Oo Hal Dheeri Lagu Daray Iyo...
Cabdiqaadir Jirde Oo Ka Firka Naxsan Mansab Ku Cusub Xayndaabka WADDANI Iyo Cabdiraxmaan Cirro Oo Laba Daran Mid Dooro Soo Wajahdey
Shirkii golaha dhexe Ee Xisbiga WADDANI oo dib loogu dhigay ka dib markii khilaafyo huursanaa cirka isku shareereen sidoo kale dib udhigista shirweynaha ayaa la sheegay inay qayb ka tahay todoba qoddob oo lagu muujinayo awooda mansab xisbiga laga siiyey xirsi cali xaaji xasan kaas oo dood ka dhigay in meesha laga saaro awoodo badan oo guddoomiyaha xisbiga waddna lahaa. Shirka golaha dhexe oo lagu wadey in maalinta bariya usoo gabo gabeyso ayaa aan udhicin sidii loogu talo galay waxaana muuqata durba fawdo ka curatay shirka golaha ee xisbiga.
Wararka wargeyska SAHAN ka helayo xubno ka agdhow xayndaabka xisbiga waddani ayaa uxaqiijiyey qoddobada lagu meel marinayo shirweynaha ee xirsi cali xaaji xasan la siiyey oo dib loogu qeexay xeerka xisbiga. Awdoodaha ayaa waxaa ka mid ah (1) awooda maaliyadeed ee xisbiga in uu isagu maamulo.(2) In dhamaan xafiisyada Xisbiga Ee Qurbajoogtu isaga Hoosyimaadaan Oo Awoodooda Leeyahay (3) Awooda Kaambaynka Xisbiga Inuu isagu maamulo Ama Kaambayn Manager(4) Hagida Hawl Maalmeedka Xisbiga. waxaana lagu wadaa shirka xisbiga in lagu ansixiyo toddoba qoddob balse inta aanu helnay ayaa ah afartaa qodob eek or ku xusan qodobadaas ayaa gabi ahaanba maroorsadey awoodii guddoomiyah xisbiga ee hagilahaa awoodahaas oo dhan.
Waxaana maalinta bari loo badelay maalin lagu soo bandhigidoono barnaamijka xisbiga WADDANI Balse waxaa daba yaala hirdan siyaasadeed oo lagu kala jiidanayo awoodaha ugu sareeya xisbiga oo udhaxeeya hanmaaganayaasha xisbiga iyo xulufo kala taabacsan.
Sidoo kale waxaa bilaabmay kala garabsi iyo dano shaqsiyadeed durba cirka isku shareeray oo kiciyey xaraarada iyo xiisada xisbiga ka dib markii laba xubnood oo halgan xisbiga usoo galay lagu badeshay xubno ay dantooda ka arkayeen masciideeda xisbiga ka arrimiya waxaase la dhawrayaa halka xaalkoodu saldhigto.